Ahoana ny fomba fiasa "ambaran'ny" WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba fiasan'ny WhatsApp "statuses" vaovao
WhatsApp, ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao, ary an'ny Facebook, dia manamarika tsara izay rehetra ataon'ireo mpifaninana aminy, mba handikana azy io tsy misy henatra ary hampiditra azy ao amin'ireo fisehony. Ny farany dia ny an'ny fanjakana, izay amin'ny fomba Snapchat madio indrindra dia ahafahantsika manana hafatra ephemeral na izay mitovy amin'ny faharetan'ny fotoana iray amin'ny fanjakana ao amin'ny fampiharana.
Ireo andian-teny mahazatra toy ny "Any am-piasana", "Ny be atao" na ny "Any am-pianarana" dia tantara ary manomboka izao dia afaka manana fanjakana hafa ianao. Mba tsy hialanao amin'ny antsipiriany iray akory, anio dia holazainay aminao ny fampahalalana rehetra momba ny fiasa vaovao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo ary holazainay aminao ihany koa ny fomba fiasan'ny "fanjakana" vaovao an'ny WhatsApp.
1 Inona ny status WhatsApp?
2 Ahoana ny fiasan'ny status WhatsApp na WhatsApp status
3 Mangina amin'ny fomba tsotra ny fanjakana
Inona ny status WhatsApp?
Voalohany indrindra, tsy azonay atsahatra ny manazava ny atao hoe status vaovao an'ny WhatsApp, izay efa mahatratra ny mpampiasa rehetra amin'ny endrika fanavaozana ary natao batemy ho «WhatsApp Status » na amin'ny Espaniola «Toetran'ny WhatsApp".
Ity fampiasa vaovao ity, izay mety mbola tsy mbola nisy tamin'ny fitaovanao tamin'ny alàlan'ny rafitra fiasan'ny iOS na Android, satria mbola mampandeha ity safidy ity ny WhatsApp, dia hahafahantsika mizara sary, gif na horonan-tsary izay tsy ho hita afa-tsy mandritra ny 24 ora. Raha te-hiditra ny satan'ny dia hahita zana-kazo eo amin'ny efijery lehibe an'ny fampiharana ianao, izay ahafahanao mamorona ny satananao fa tsy mahita ny an'ny fifandraisana hafa koa.
Ahoana ny fiasan'ny status WhatsApp na WhatsApp status
Ny zavatra voalohany tokony hataonao hahafahanao mampiasa ny satan'ny WhatsApp dia ny manavao ilay fampiharana, amin'ny alàlan'ny App Store na Google Play. Raha efa naneho hevitra teo aloha izahay, na dia manana ilay rindranasa nohavaozina aza ianao, dia mety mbola tsy manana ilay endri-javatra vaovao, ary mbola ampitaina any amin'ny ankamaroan'ny firenena ny fiasa vaovao. Raha mbola tsy anananao io dia aza kivy ary hataonao miasa ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Raha efa ampiasanao io dia hahita takelaka vaovao eo amin'ny pejy lehibe antsoina hoe "States" ianao.
Mba hamoronana sata WhatsApp dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Midira WhatsApp raha mbola tsy tao anaty fampiharana ianao
Mandehana mankany amin'ny tab "States" ankehitriny, izay ho hitanao eo anelanelan'ny tabilao "Chats" sy "Calls" raha efa nahazo ny fiasa vaovao avy amin'ny WhatsApp ianao
Tsindrio ny safidy "My status - add a status update" hanombohana ny famoronana ny fanao manokana
Amin'ity fotoana ity dia manana safidy roa isika. Ny voalohany dia ny misafidy sary, horonan-tsary na GIF iray na maromaro avy amin'ny galerin'ny fitaovanao. Ny faharoa araka ny noeritreretinao dia ny maka sary na horonantsary amin'izao fotoana izao amin'ny alàlan'ny fakantsary fakan-tsarinao
Vantany vao misafidy ny sary, horonan-tsary na GIF tianao hofidina ho toy ny sata ianao dia hahita safidy isan-karazany hanamboarana ny satananao amin'ny lahatsoratra na emotika. Rehefa vitanao dia tsindrio ny bokotra havanana eo ambanin'ny efijery. Manomboka amin'ity fotoana ity dia ho vonona ny ho hitan'ny mpampifandray anao ny toe-javatra, eny, mandritra ny 24 ora fotsiny.
Izay fanjakana isaky ny eritreritrao Azonao atao ny manamboatra azy io mba ho hitan'ny mpifandray rehetra aminao na ny sasany amin'izy ireo ihany, zavatra izay tsy isalasalana fa ny tena mahaliana. Mba hanaovana izany, mila miditra amin'ireo fikirana WhatsApp fotsiny ianao ary miditra amin'ny kiheba "Kaonty", miditra "Privacy" ary kitiho ny "Tsiambaratelo momba ny fiainana".
Ireo satan'ny WhatsApp vaovao dia mamela antsika hahafantatra fampahalalana manan-danja ihany koa, toy ny mifandraika amin'ny fomba fijery efa azony, ary koa ny fahafantarana hoe iza amin'ireo mpifanerasera aminay no nijery izany. Raha te hahalala an'ity fampahalalana ity dia sokafy ny sata mifandraika ary tsindrio ny faritra ambany amin'ny efijery mba hampisehoana tabilao misy ny anarana hoe "View by".
Mangina amin'ny fomba tsotra ny fanjakana
Mpampiasa maro no variana tamin'ny safidy WhatsApp Status vaovao ary efa nanomboka nanapoaka baomba ny sisa taminay tamin'ny satan'izy ireo tsy tapaka. Raha tsy te handany ny tontolo andro hijerena horonan-tsary, sary na GIF an'ny mpampiasa hafa ianao, aza manahy satria ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo dia namela safidy hampanginana ny satan'ny fifandraisantsika.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy miditra amin'ilay kisary ianao amin'ireo teboka telo izay miseho eo ankavanan'ny fanjakana tsirairay. Rehefa tsindrio ity kisary ity amin'ny famoahana fifandraisana, dia ho hitanao fa ny safidin'ny Esory ny satan'ny [anaran'ny fifandraisana]«. Manomboka amin'ity fotoana ity dia tsy hahita famoahana an'io fifandraisana io intsony ianao, izay amin'ny tranga maro dia ho fanamaivanana tanteraka.
Ny WhatsApp dia maniry bebe kokoa ny hitovy amin'ireo fampiharana hafa izay manana laza malaza ankehitriny, zavatra iray izay azo antoka fa tsara, nefa miaraka amin'izay dia tsy dia be loatra izany ary mieritreritra aho fa ireo tompon'andraikitra amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no eo dia manomboka manadino hoe iza no manana eo am-pelatanan'izy ireo fampiharana fandefasan-kafatra fa tsy tambajotra sosialy misy fanahin'ny zavatra maro hafa.
Manantena aho fa hihatsara hatrany ny WhatsApp rehefa mandeha ny fotoana, saingy antenaiko fa ho any amin'ny làlan-kafa izany ary hahafinaritra ho an'ny mpampiasa an'arivony vitsivitsy ny fahafaha mamorona fanjakana, fa amin'ity karazan-javatra ity dia efa manana fampiharana hafa isika. Raha ny amiko, ary azo antoka fa an'ny an'ny maro, ilay fisehoan-javatra vaovao izay azo nanomboka omaly dia tsy misy ifandraisany mihitsy, aleoko fa ireo karazana fanatsarana hafa dia avy izay no nanararaotanay tsara kokoa.
Efa manana ny fampiasa WhatsApp vaovao ve ianao?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay, ary lazao ihany koa izahay raha efa namorona ny satananao voalohany ianao tao anatin'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ahoana ny fomba fiasan'ny WhatsApp "statuses" vaovao
Ny Samsung Gear VR vaovao dia hanana fanaraha-maso lavitra izay hampidirina ao anaty solomaso
Samsung dia hanomboka mivarotra ny Galaxy Note 7 indray, miverina ary miaraka amin'ny bateria kely kokoa